Ihe ị ga-ahụ na Avilés, Asturias | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Aviles, General
Onu ogugu nke Avilés bụ obodo na-anabata ma na-adọrọ mmasị, nwere obodo ochie mara mma na nke ọdịnala. Ọ bụ n'etiti ndị ezigbo njem nleta obodo ileta jụụ -enwe obi ụtọ n'akụkụ ya. Ọ dị kilomita ole na ole site na Gijón na Oviedo, n'ihi ya, ọ bụ nnukwu nkwụsị iji hụ ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme na obere oge.
Ka anyị lee ihe anyị nwere ike ịchọta mmasị na obodo Avilés, obodo Asturian nke na-enye obí eze, ụlọ ochie na ikuku dị mma. Ọ bụ obodo nwere otu n'ime obodo ochie mara mma na Asturias, yabụ ọ bara uru ịkwụsị ma ọ dịkarịa ala otu ụbọchị iji hụ ya.
1 Ogige Spain
2 Chọọchị San Nicolás de Bari
4 Gburugburu Sabugo
5 Ihe akpụrụ akpụ nke La Monstrua
6 Ogige Ferrera
7 Emelọ Niemeyer
8 Na-eri nri na Avilés
Ebe akụkọ ihe mere eme nke Avilés bụ otu n'ime ebe kachasị mma ya, yabụ anyị na-atụ aro ịmalite ije na etiti Plaza de España, nke anyị ga-adị mfe iru. Nke a square bụ nnọọ obosara na ya na anyị nwere ike ịhụ nkume ụlọ nke Town Hall na nakwa nke ochie Ferrera Obí, taa ghọrọ ụlọ nkwari akụ mara mma na nke okomoko. N'ụbọchị, nnukwu ogige a nwere ọtụtụ ụlọ mmanya na mpaghara ahụ, zuru oke maka ị aụ mmanya. Na mgbakwunye, nso anyị ga-ahụkwa ụlọ nri na ụlọ cider ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ kpakpando ọ tasteụ theụ nke Asturias, cider.
Chọọchị San Nicolás de Bari
Ọ bụrụ na anyị gbagoo n'okporo ámá na-esote Ferrera Palace anyị ga-ahụ ụka a na ọmarịcha ụlọ nsọ. Na ebe a bụ ọmarịcha ụka nke San Nicolás de Bari, nke malitere na narị afọ nke iri na atọ ma bụrụ nke ndị mọnk Franciscan. Ya na cobbled n'okporo ámá ọ bụ a mara mma n'anya kwesịrị ịhụ. Nke a bụ ihe na-eme ka obodo a nwee obodo ochie kwesịrị ịhụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe ọ enjoyụ dị mma n'oge mgbede, ị gaghị echefu Calle Galiana. A n'okporo ámá nke na-aga n'ihu nwere otu amara dị ka narị afọ nke XNUMX, nke anyị ga-ahụ a nnukwu obosara arcaded ebe enwere otutu ebe ihe onunu Ha na-enye ụdị mmanya ọ bụla. N’ebe dị nso ka ị ga-ahụ ụfọdụ ụlọ ndị India ochie. Ọ bụ ezie na ebe a emeela agadi ma nwee ike ịhụ ya n'ụlọ ọ bụla na ihe owuwu ụzọ mbata, ikuku na-eto eto ma na-adị ndụ n'abalị, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ebe a na-a aụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu na-atọ ụtọ cider na ebe ndị mara mma, ị ga-aga Sabugo obi, ma ọ bụ agbata obi nke ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ. Ọ bụ naanị otu na Middle Ages hụrụ na mpụga mgbidi obodo. Taa ọ bụ obere agbata obi nwere ọtụtụ ọmarịcha ebe ị nwere ike ịchọta ụlọ ochie ejirila ghọọ mmanya tapas ebe ị nwere ike ị aụ mmanya na abalị ma ọ bụ n'ehihie. N'ebe a, anyị ga-ahụ ụka ochie nke obodo ahụ, nke dị na narị afọ nke XNUMX dị obere maka bourgeoisie na nke ha ga-ewuru ọzọ, nke Santo Tomás de Canterbury.
Ihe akpụrụ akpụ nke La Monstrua
Na nke a peculiar aha mara Eugenia Martinez Vallejo, Nwanyị amụrụ n’ọrịa nke butere oke ibu. Ya mere, ọ bụ akụkụ nke ụlọ ikpe Carlos II dị ka ndị ahụ na-eje ozi ịnụ ụtọ na ịkpa ọchị ndị a ma ama. Anyị nwere ike ịchọta n'okporo ámá nke ọdụ ihe akpụrụ akpụ nke agwa a na-adọta uche dị ukwuu. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ihe oyiyi nke ndị njem nleta na-ese foto.
Dị ka a ga-asị na ọ bụ nnukwu obodo, Avilés nwekwara nnukwu ogige ya na-acha akwụkwọ ndụ, a ezigbo ebe ije na ezumike. Ọ bụ ogige kere na English na French ekwekọghị. Ogologo oge gara aga ọ bụ ogige ahụ nke ndị klas nke elu jiri mee ebe ntụrụndụ n'ihi ọbịaru ya nso na Ferrera Palace. Taa ọ bụ mpaghara ọha na mmadụ niile nwere ike ịnụ ụtọ ya.
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ebe ndị nwere mmasị na Avilés dị na obodo ochie ya, obodo a na-arụzigharị. Ihe akaebe nke a bụ Niemeyer Center, nke bụ a oghere ọdịnala nke onye nhazi Brazil bụ Niemeyer kere. Ọ bụ ebe ọdịbendị na ije na-agwakọta, na ọrụ nke na-eme ka ọ bụ ode na okike. O nwere nnukwu square, ụlọ mgbakọ, dome nke ahụ bụ ebe ngosi, ụlọ na-eme ọtụtụ ihe na ụlọ nche na-ele anya osisi. Ihe niile sitere n'ike mmụọ nsọ nke ihe okike ndị nọchiri anya ụlọ ọrụ ụlọ n'oge a. Na mgbakwunye na ịnụ ụtọ ihe ngosi ma ọ bụ ọrụ, anyị nwere ike ịhụ ebe pụrụ iche nke dị iche na akụkụ ochie nke obodo ahụ.
Na-eri nri na Avilés
Cidtọ cider dị mkpa, mana ị ga-enwekwa ọurụ Asturian. Ebe dịka Tierra Astur Avilés, ụfọdụ ụlọ obibi ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ efere dịka sausaji ma ọ bụ chiiz na iko cider.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Avilés, Asturias